वसन्त लोहनी - basanta lohani | Nagarik News - Nepal Republic Media
वसन्त लोहनीका लेखहरु :
नागरिकता दिने कि बाँड्ने
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संगठित भएको अवस्थामा संविधानको अर्थ हुँदो रहेनछ। अध्यादेशबाट राज गर्न पनि पाइने, संविधान पनि सत्तामा टिक्ने आवश्यकता मिलाउन संशोधन गर्दै जान पाइने रहेछ। यसक्रममा नेपाल नागरिकता संशोधन गरिएका हो महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँगको सहयात्राका लागि। तर यी सबै पात्र मात्रै हुन्। यसमा तीन कुरा छन्– समय, नियत र पारस्परिक व्यवस्था।
वसन्त लोहनी ११ जेष्ठ २०७८ मंगलबार ५ मिनेट पाठ
अन्ततः को रुने, को हाँस्ने ?
प्रचण्ड बहुमतको सरकारले तय गरेको यात्राबाट मुलुक अहिले सङ्गीन मोडमा आइपुगेको छ– कानुनसम्मत जुट, लुट र फुटको त्रिवेणी हुँदै। संविधान, विधान, नियम कानुन सब व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने प्रयास जारी छन्। अपराध र राजनीति सहयात्री बनेका छन्। अब बन्ने सत्ता समीकरणले पनि यसै सेरोफेरोबाट अगाडिको यात्रा तय गर्नुपर्ने देखिन्छ।
वसन्त लोहनी २ चैत्र २०७७ सोमबार ९ मिनेट पाठ
सरकारको वैधानिकता कति?
हिजो जनताको संविधान थिएन, रडाको हुन्थ्यो। आज छ। सात वर्ष लगाएर अरबौँ खर्च गरी अनि विश्वको सबै राम्रो कुरा समेटेको संविधान छ। रडाको कम हुनुपर्ने हो तर झन् बढेको छ।
वसन्त लोहनी ३ फाल्गुन २०७७ सोमबार ९ मिनेट पाठ
हिजोको परिवेश आजको वास्तविकता
शृङ्खलाबद्ध छलफलको यो दोस्रो खेपमा छौँ हामी । यो कहालिलाग्दो अवस्थामा आज मुलुक किन र कसरी आइपुग्यो ? यसको चुरो पत्ता लगाउन नेपालको अर्थ राजनीतिक इतिहासलाई सरसर्ती हेर्ने क्रममा छौँ । यतिखेर अनायास १३औँ शताब्दीका फारसी भाषाका महान् साहित्यकार जलालुद्दिन रुमीको भनाइ सम्झिन पुगेको छु ।
वसन्त लोहनी ५ माघ २०७७ सोमबार ८ मिनेट पाठ
जब उनका राहु केतु झस्किए र मिलेर बलिया पनि भए तब उनले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर।
वसन्त लोहनी १३ पुस २०७७ सोमबार ८ मिनेट पाठ
कसरी झुटको पुलिन्दा भए ?
संसारमा कहीँ हुन्छ प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्री भ्रष्टाचारी तर त्यही प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने प्रधानमन्त्री निष्कलङ्क ?
वसन्त लोहनी २२ आश्विन २०७७ बिहीबार ११ मिनेट पाठ
आगो लागेको त्यो बस्तीमा कोलाहल बोकेको त्यो सन्नाटा लाटो मान्छेको अव्यक्त अभिव्यक्ति बनेर सागरको छालजस्तो
वसन्त लोहनी ३१ श्रावण २०७७ शनिबार १ मिनेट पाठ
आगो लाग्न सक्छ
राष्ट्रलाई दिनदहाडै लुटेका शासकले ब्रिफकेसका ब्रिफकेस सुनको बिस्कुट अब खान थालिसके अनि टेलिभिजनको पर्दामा राष्ट्रिय पोसाकमा सजिएर
वसन्त लोहनी ६ असार २०७७ शनिबार १ मिनेट पाठ
भारतको यो कस्तो अन्याय ?
भारतले हाम्रो जमिन भित्रबाट चीन जोड्ने सडक बनाएर २०७७ वैशाख २६ गते उद्घाटन ग-यो। नेपाली जनताले व्यापक विरोध गरे। यसमा छलफल गर्नुको सट्टा भारतले आफ्नो सेना प्रमुखलाई यसरी बोल्न लगायो, ‘नेपालले अरू कसैको इसारामा पिथौरागढ–लिपुपेक सडक निर्माणको विरोध गरेको हो।’
वसन्त लोहनी १७ जेष्ठ २०७७ शनिबार ५ मिनेट पाठ
वसन्त लोहनीका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्